Privatejetcharterflightservice.com kuzvipira kwako vakachengeteka:
Privatejetcharterflightservice.com iri rakazvipira kuva nechokwadi dzakachengeteka kufamba kwedu nemakasitoma nokushanda chete ndege uye dzaishandisa zviri zvaidiwa Faa murau aizivikanwa rwemberi 135. The rwemberi 135 advertising akasikwa kupa mureza ndege vakachengeteka, akavhiyiwa, rechengetedzo, nemirau kutyora.
Kuwedzera nezvinodiwa nokure Part 135, Privatejetcharterflightservice.com akagadza kunyange yakasimba kuchengeteka nzira kuburikidza yaida wechitatu-party hazvikuvadzi odhita vose Chartered ndege. Izvi yechitatu-party kuchengeteka odhita, kwaitungamirirwa TripCHEQ, achapa chivimbo kuti mumwe nomumwe Chartered ndege chiri kuitwa zvikuru inobvira tsika.
Safety wako Pokutanga yedu:
Privatejetcharterflightservice.com anodada unyanzvi hwedu kupa mamwe yakachengeteka mashoko chaiwo nechimwe kutiza. Wyvern uye Aviation Research Group (ARG / US) ndivo vaitungamirira yechitatu-party, rakazvimirira kuchengeteka Vaongorori vari dzidzira mu kuitisa pamusoro-panzvimbo nendege kuvariritira uye Kuongorora rikarira ruzivo zvinodiwa.
ARG / US kwakasimbiswa TripCHEQ purogiramu, iyo rinopa mashoko anokosha chokuita kutiza kwenyu. TripCHEQ rinobatanidza mashoko dzaishandisa ndege uye Anoongorora navo nendege-ne-muchitiza hwaro.
Zvose dzaishandisa yedu inofanira kuva ARG / US Gold, Gold + kana Platinum yavose sezvavakatarirwa. Mukuwedzera, vezvikepe yavo inofanira vataipa uye vaipupurirwa. ARG / US TripCHEQ kunokosha kuti mhepo bumbiro vatengi nokuti zvinopa akazvimirira, unbiased vimbiso kuti ndege uye vashandi vakasarudzwa nokuda kwavo bumbiro kutiza zvinoenderana nomurayiro nedzidziso yakachengeteka mitemo iri private ndege indasitiri.